६२ वर्षका अनिल कपूरको जवानिको रहस्य यस्तो !::Independent News Portal from Nepal.
६२ वर्षका अनिल कपूरको जवानिको रहस्य यस्तो !
मुम्बई ।भारतीय अभिनेता अनिल कपूरले बलिउड फिल्म उद्योगमा चार दशक पूरा गरिसकेका छन् । तर अझै पनि उनको जवान लुक देखेर जो कोही हैरान हुन्छन् । साथै अनिल कपूर यसरी जवान देखुनुको पछाडिको राज जान्न उनका फ्यानहरु आतुर हुन्छन् ।
प्रकाशित मिति : बुधबार, फाल्गुन २९, २०७५ , ७:४५ बजे
द्घारिका उदय सिनेमा दोस्रो वर्षमा प्रवेश
बुटवलमा ‘द फेसन शो १९ नेपाल’ सम्पन्न
भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २ को विजेता राम लिम्बु
नेपाली चलचित्रको विकासका लागि रूपन्देहीमा चलचित्र महोत्सव हुने
बुटवलको भाटभटेनीमा सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्स संचालन